लिभरपुललाई कसले रोक्ला?
ऋग्वेद शर्मा मंगलबार, असोज १३, २०७७, १३:५९
काठमाडौं- प्रिमियर लिग नयाँ सिजनमा लिभरपुलले तीन खेल खेल्यो, यत्तिकै आधारमा अगाडिको अनुमान गर्नु न्यायसंगत नभए पनि यी खेलबाट देखिने स्पष्ट विषय हो- विपक्षीले लिभरपुलविरुद्ध गुमाएका हरेक अंकको ठूलो महत्व रहनेछ। यस्तोमा लिभरपुललाई कसले रोक्ला?
लिभरपुलले पहिलो खेलमा लिड्स युनाइटेडविरुद्ध ४-३ को जित निकाल्यो। चौथो मिनेटमा मोहम्मद सलाहले पेनाल्टीमार्फत अग्रता पाए पनि त्यही एक खेल हो, जहाँ लिभरपुललाई केही मुस्किल देखिएको थियो। ६६औँ मिनेटसम्म बराबरी भएको खेलमा ८८औँ मिनेटको पेनाल्टीमार्फत सलाहले नै जित दिलाएका थिए।
अनुमान थियो, दोस्रो खेलमा चेल्सीविरुद्ध लिभरपुललाई केही मुस्किल हुनेछ। तर मैदानमा त्यस्तो देखिएन। पहिलो हाफको अन्तिममा चेल्सी १० खेलाडीमा सीमित भएपछि त सम्हालिनै सकेन। खेलको ५०औँ र ५४औँ मिनेटमा सडियो मानेले गोल गर्दा २-० को सहज जितमा लिभरपुल बढ्यो।
सोमबार राति आर्सनलविरुद्धको खेल लिभरपुलका लागि विशेष थियो। लिभरपुलसँग खेल्नुअघिको दुवै खेलमा आर्सनल राम्रो देखिएको थियो। यसैले लिभरपुललाई रोक्न सक्ने खेलमा रुपमा हेरिएको थियो। तर २५औँ मिनेटमा अग्रता बनाइसक्दा पनि आर्सनल सम्हालिन सकेन। लिभरपुलले त्यसपछि तीन गोल गर्‍यो।
गएको सिजन ३० वर्षपछि लिभरपुलले प्रिमियर लिग उपाधि जितेको थियो। त्यसअघिको सिजन च्याम्पियन्स लिग जितेको टिमका लागि प्रशिक्षक योर्गेन क्लोपले लगातार ठूलो खुसी फर्काएका थिए।
सन् २०१५ को अक्टोवर ८ मा लिभरपुलको प्रशिक्षक नियुक्त हुँदा क्लोपले भनेका थिए- ‘हामीले शंका गर्नेहरुलाई विश्वास गर्न सक्ने बनाउनुछ।’ नभन्दै अहिले क्लोप र उनको प्रशिक्षणमा रहेको लिभरपुलमाथि कसैलाई शंका छैन, लिभरपुल विश्व फुटबलको उत्कृष्ट टिममध्ये एक हो।
सन् १८९२ देखि १९९२ सम्म इंग्ल्याण्डको माथिल्लो डिभिजनलाई ‘फुटबल लिग फस्ट डिभिजन’ का नामले चिनिन्थ्यो। जसमा १९००-०१ मा लिभरपुलले पहिलो उपाधि जितेको थियो। त्यसपछि १९०५-०६, १९२१-२२, १९२२-२३ लिग जित्यो। १९३९ देखि दोस्रो विश्वयुद्धका कारण रोकिएको लिग १९४६-४७ को सिजनमा हुँदा उपाधि लिभरपुलले नै जितेको थियो।
त्यसपछि भने लिभरपुलले उपाधि जित्न १७ वर्ष पर्खनुपर्‍यो। १९६३-६४ को सिजनमा र त्यसपछि १९६५-६६, १९७२-७३ मा उपाधि जितेको लिभरपुलले त्यसपछिको लामो समय एकछत्र राज गरेजस्तो भयो। १९७५-७६, १९७६-७७, १९७८-७९, १९७९-८०, १९८१-८२, १९८२-८३, १९८३-८४, १९८५-८६, १९८७-८८ हुँदै १९८९-९० मा लिभरपुलले १८ पटक उपाधि जितिसकेको थियो।
यसपटक लिभरपुललाई प्रतिस्पर्धा दिने क्लबका रुपमा म्यानचेस्टर सिटीलाई नै हेरिएको हो। सिटीका प्रशिक्षक पेप गार्डिओलाको योजनामा सिटीले पछिल्ला वर्ष लिगमा राम्रो गरिरहेको पनि हो। तर यसपटक लेस्टरसँगको ५-२ को हारपछि सिटीमाथिको विश्वास धर्मराएको छ।
सिटीले अहिले बेनफिकाका डिफेन्डर रुबेन डाएसलाई भित्र्याउँदै छ। त्यसअघि नै ब्रनमाउथबाट डिफेन्डर नाथन बेन्जामिनलाई ल्याएको सिटीले लेस्टरसँग खेल्दा चोटका कारण केही महत्वपूर्ण खेलाडी बाहिर पनि थिए। यसैले त्यही एक खेलका आधारमा सिटीमाथिको विश्लेषण सही नहुने भए पनि प्रतिस्पर्धामा लिभरपुलको उचाइ फरक देखिएको छ।
लेस्टरविरुद्ध म्यानचेस्टर सिटीले चौथो मिनेटमा नै अग्रता बनाइसक्दा ५३औँ मिनेटमा पछि परेको अवस्था लिभरपुलमा आएको भए लिभरपुलको डिफेन्स लाइन त्यति नै कमजोर देखिन्थ्यो होला त? लिभरपुल मनोवैज्ञानिक र खेलशैलीका आधारमा समेत विपक्षीविरुद्ध दबाब बनाउन सक्षम देखिन्छ।
अहिले तीन खेल हेर्दा लेस्टर सिटी र इभर्टनको खेल पनि बलियो देखिएको छ। तर उनीहरुले लिभरपुलसँगको तीब्रता मिलाउन सक्ने अनुमान अहिले नै छिटो हुनेछ। राम्रो गरेका दुई टिमविरुद्धको अपमान गर्न खोजिएको त होइन तर अहिले लिभरपुललाई रोक्न सक्ने टिममा यिनीहरुको स्थान बनिसकेको देखिँदैन।
चेल्सी र म्यानचेस्टर युनाइटेडको पुरानो अधिपति त अहिलेसम्म पनि हराइरहेकै देखिन्छ। भलै चेल्सीले फुटबल बजारमा ठूलो रकम खर्च गरेको होस्। त्यसमा सुधार होला, तर अहिले उनीहरुको खेल प्रतिस्पर्धी अवस्थाबाट निकै पछि देखिन्छ। जहाँ लिभरपुल अहिले पनि उस्तै खतरनाक देखिइरहेको छ। यसैले लिभरपुलको अवस्था हेरेर प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने अरु टिमलाई कमजोर महसुस भइरहेको हुनुपर्छ।
खेलाडी ट्रान्सफरको समय ठूलो हल्लाखल्लामा सामेल नभएरै पनि लिभरपुलले च्याम्पियन्स लिगका अब्बल मिडफिल्डर थियागो अलकान्टारालाई बायर्न म्युनिकबाट सहज रुपमा भित्र्याउन सक्यो। चेल्सीविरुद्ध ४५ मिनेट मात्र मैदानमा रहेका उनले के गर्न सक्छन् त्यो देखाएकै छन्।
वुल्भ्सबाट विंगर डिएगो जोटालाई ल्याउन सक्नु पनि लिभरपुलको राम्रो ब्यापार मानिएको छ। आर्सनलविरुद्ध खेलको ८०औँ मिनेटमा सडियो मानेको स्थानमा मैदान पसेका जोटाले पनि राम्रो प्रभाव नै पार्न सके। ८८औँ मिनेटको उनको गोल पनि त्यसैको प्रमाण हो। क्लोपको टिममा उनी भविष्य सूचककै रुपमा देखिए।
आर्सनलविरुद्ध ६६ प्रतिशत बलमा नियन्त्रण बनाउँदै २१ सट प्रहार गरेको लिभरपुलविरुद्ध आर्सनल जसरी सम्हालिन सकेन त्यसको डर अरुमा पनि छ नै। जहाँ आर्सनलले पोस्टको दिशामा चार सट मात्र प्रहार गर्नु पनि कमजोर खेलको आधार नै हो। खेलमा लिभरपुलले ७७२ पास मिलाउँदा आर्सनलले ३९५ पास मात्र खेल्न सकेको थियो।
यसैले त लिभरपुलको खेललाई लापरवाही र अव्यवस्थित खेलका रुपमा ब्याख्या गरेका फुटबल पण्डित एवं म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्वमिडफिल्डर रोय किनलाई खेलपछि क्लोपले प्रश्न गरे- ‘के मैले सहि सुनेको हो? रोयले भने आज हामीले अव्यवस्थित रुपमा खेल्यौँ? साच्चै उनले त्यस्तै भने?’
‘उनले भनेकै हो भने म त्यो सुन्न चाहन्छु, सायद उनले अरु नै खेलका बारेमा कुरा गरेका होलान्। यो खेलको बारेमा त्यस्तो विश्लेषण त हुनै सक्दैन, माफ गर्नुहोला।’ यो भनाइमा खेलको अवस्थापछिको विचार मात्र होइन क्लोपको आत्मविश्वास पनि झल्कन्छ। जसले लिभरपुलको अगाडिको बाटो अझ बलियो बनाउन प्रेरणा मिल्ने नै छ।